Xildhibaan sheegay in lagu soo duulay Soomaaliya | Radio Wadani News
Home » WARARKA » Xildhibaan sheegay in lagu soo duulay Soomaaliya
Xildhibaan sheegay in lagu soo duulay Soomaaliya
RadioWadani-Xildhibaan Daahir Amiin jeesow oo kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa si kulul waxaa uu uga hadlay safarkii ay Magalada Kismaayo u tageen Madaxweynayaashii hore ee Galmudug & Koonfur Galbeed.
Waxaa uu sheegay in Magalada Kismaayo ay si sharci-darro ah ku tagtay diyaarada iyo wafdga saarnaa,isla markaana shirkadda lahe diyaaradaas ay jebisay Sharciga u yaalla dalka Soomaaliya.
Xildhibaanka oo Wariyeyaasha Muqdisho kula hadlaayay ayaa waxaa uu intaasi kudaray hadalkiisa in diyaaradaas ay aheyd mid Qatar gelin kartay amniga dalka,isla markaana aysan ka warheyn Maamulka hawada Soomaaliya.
Baarlamaanka Soomaaliya kulamadii markii ay furmaan ayuu sheegay inay dacwada diyaaradaas iyo dalka laga lahaa geyn doonaan,waxaana dowladda Soomaaliya uu ka dalbaday inay jawaab baarlamaanka ka siiso Diyaaradaas.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in Shacabka ku nool deegaannada Jubbaland lagu haayo dhibaatooyin kala duwan,hayeeshee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan Xildhibaannada kasoo jeeda Jubbaland ay badbaadin doonaan.
Previous: Wasiirkii Amniga Jubbaland oo Maxkamad la horgeeyay